Welthungerhilfe: Welthungerhilfe oo ku-sugan Geeska Afrika – Waxa aanu qabano
Welthungerhilfe waxay ka-shaqaysaa wanaajint sugnaanshaha cuntada iyo nafaqada ee Geeska Afrika, taas oo ku-sugan halis ka-soo-gaadha abaaraha iyo jawiga cimilada xad dhaafka ah ee sii-kordhaya ee ka-imanaya isbaddalka cimilada iyo khataraha dad-sameega ah.
Gudaha dalka Itoobiya, Welthungerhilfe waxay ka fulinaysa mashaariic isku-dhafan oo ay ku-xoojinayso xaqiijinta sugnaanshaha cuntada iyo nafaqada oo waarta oo ay heer qoys ka-hirgeliso, iyada oo isku-xidhaysa qaybaha kala-duwan ee sida beeraha, deegaanka, horumarinta dhaqan dhaqaale, biyaha, nadaafada, fayo-dhawrka, barashada nafaqada iyo kor-u-qaadidda bulshada rayidka ah iyo in laga-dhigo kuwa wax-ka-qabanaya arrimaha nafaqada iyo jinsiga. Waxaa kale oo aynu isku-xidhnaansho ka-dhex abuurnaa dadaalada dhimidda masiibooyinka, caawimaadda aadminimo, dhismaha awoodda u adkaysig, iyo horumarinta.
Anago kaashanayna Haay’adaha wada shaqeynta leenahay, waxaanu qabanaa shaqo ku-salaysan mudnaanta bulshada ee ay dadku iskood u gartaan, waxanu isku-xidhnaa aqoonta iyo waayo aragnimada dadka deegaanka iyo adeegsiga xirfadaha casriga ah. Arrintani waxay anaga noo-ogolaataa in aynu door ku-yeelano siyaasadaha qaran iyo kuwa caalamiga ah iyo heerarka khuseeya bulshada aynu u adeegno.
Gudaha Somaliland, Welthungerhilfe waxay wax-ka-qabataa caqabadaha xalka degdegga ah u baahan anaga oo bixinaynaa gargaarka gurmadka laakiin waxaa kale oo aynu ka-shaqaynaa isbaddalada waqtiga dheer anaga oo xallinayna sababaha salka u ah saboolnimada iyo gaajada. Waxaa dadaalkaasi ka mid ah maaraynta khayraadka dabiiciga ah, waxbarashada aasaasiga ah, dakhli soo saarista iyo isku-xidhidda sayladda, beeraha, iyo wanaajinta kartida u adkaysiga iyo u diyaar garowga masiibooyinka ee ay bulshooyinku samaynayaan.
Meelaha aynu diiradda saarno ee la-xidhiidha Sugnaanshaha cuntada iyo nafaqada
Anaga oo waafajinayna yoolkayaga heer adduun ee ah “in meelaha aynu ka-shaqayno ku-guulaysano dabar-goynta gaajada”,waxaanu door ku-yeelanaa mashaariicda guud ee ka-qayb-gelinta leh ee horumarinta ee heer bulsho si loogu-guulaysto sugnaanshaha cunto iyo nafaqo oo waarta oo heer qoys laga-hirgelinayo. Waxaanu arrintan ugu-yeedhnaa “All for some approach”.
Biyaha, Nadaafada, fayo-dhawrka iyo Nafaqada
Biyaha, nadaafadda iyo faya-dhawrku waxay illaa imika yihiin arrimaha ugu-waa-weyn ee anynu diiradda saarno. Wuxuu wax-ka-qabtaa baahida aasaasiga ah ee dadka aynu u adeegno ee ku-nool magaalooyinka iyo tuulooyinka iyada oo la-caawinayo beeraleyda dhulka yar qodata iyo xoolo-dhaqato beeraleyda. Sababaha nafaqa-darada salka u ah ee ka-jira Itoobiya iyo Somaliland, waxaanu si joogto ah diiradda u saarnaa isku-dhafidda cilmiga nafaqada iyo mashaariicda Biyaha, nadaafada iyo fayo-dhawrka. Waxaanu si weyn culayska u saarnay adeeg waara oo ah nidaamyada keenidda, iyo weliba kordhinta faa’iidada laga helayo maalgelinta lagu-samaynayo kaabayaasha dhaqaale ee biyaha, nadaafada iyo fayo-dhawrka ka-jira heer gobol.
Waxaanu bartilmaameedsanaynaa xoojinta Sugnaanshaha cuntada iyo nafaqada ee beeraleyda dhulka yar qodata iyada oo la-adeegsanayo xirfada beerfalashada ee la-wanaajiyey, waraabka, maaraynta khayraadka dabiiciga ee la-xidhiidha hawlaha dakhli-sameenta, isku-xidhka suuqa, farsamaynta iyo suuq geynta wax-soo-saarada beeraha, iyo barashada nafaqada. Awoodda u adkaysiga abaaraha iyo isticmaalka wanaagsan ee khayraadka deegaanka ka-jira ee tayada carrada kor loogu-qaadayo waxay yihiin hawlo kharash ahaan la-awoodi karo oo xagga hore loogu sii wadi karo fikradaha cusub ee qaybta beeraha loo-adeegsanayo ee Itoobiya iyo Somaliland.
Horumarinta Dhaqaale, Awood dhisida Bulshada Rayidka
Waxaanu diiradda saarnaa abuuridda fursadaha shaqooyinka ee ay ka-faa’iidaysanayaan haweenka iyo dhallinyarada bilaa dhulka ah anaga oo adeegsanayna hawlaha laga-fulinayo qaybaha kale ee horumarka ee meeshan lagu-xusay. Waxaa kale oo aynu ka-shaqaynaa xaqiijinta hirgelidda xuquuqaha ay leeyihiin dadkan gaar loo-soocay anaga oo ka-caawinayna in ay cod ku-yeeshaan oo ka-hadlaan wada hadalada dhex-maraya hay’adaha bulshada rayidka ah iyo heerarka kala-duwan ee dawladaha.
Caawimada bini Aadanimo, Ka-soo-kabsasho iyo Dhismaha Awoodda u adkaysiga
Welthungerhilfe waxay si wada-jir ah ula shaqaysaa hay’adaha rayidka (CSOs), bulshada caalamiga iyo dawladda Itoobiya iyo Somaliland. Waxayna qaybahaasi kala-shaqaysaa wax-ka-qabashada caqabadaha la-xidhiidha dhinaca taageerida aadanimo anagaoo gargaar gurmad ah siinayna dadka dhibaatooyinka ku-waxyeellooba ee ku-sugan goobaha aynu hawlaha gargaarka ka-fulino. Si aynu dadaalkan mid dhammaystiran uga dhigno, waxaanu wax-ka-qabanaa arrimaha masiibooyinka sababa anaga oo isku xidhayna caawimada degdega ah, dibu dejinta, dayactirka iyo horumar waara.